माग पूरा नभए चुनावमा भाग लिँदनौ : महतो ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले राजपाको माग पूरा भए पनि असार १४ हुने स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पार्टीले भाग नलिने चेतावनी दिनुभएको छ । पार्टीको लक्ष्य चुनाव नभएर संविधान संशोधनबाट माग पूरा गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
पार्टी कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्न गृह जिल्ला सर्लाही आउनुभएका नेता महतोले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा आफूहरू आन्दोलनमा रहेको बताउनुभएको छ । ‘माग पूरा नहँुदै चुनावमा कसरी जाने ? ’ प्रश्न गर्दै महतोले भन्नुभयो, ‘आज जेठ २४ गते, असार २ गते नोमिनेसन छ । १ गतेसम्म मधेसको माग पूरा भए पनि २ गते नै कसरी नोमिनेसन गराएर चुनावमा जाने ? हामीले तयारी गर्नु पर्देन ? चुनाव १४ गते सम्भव नै छैन ।’
वैशाख ३१ मा तोकिएको चुनाव सारेर जेठ ३१ हुँदै असार १४ गते गर्न हुन्छ भने राजपाको माग सम्बोधन गरेर १ महिना पछि सारे कुनै फरक नपर्ने महतोको भनाइ थियो । सरकारले जबरजस्ती निर्वाचन गराए देश नचिताएको द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
‘देशलाई अनहोनी संकटबाट जोगाउन जनताको माग पूरा हुनु पर्छ’, महतोले भन्नुभयो, ‘२० वर्षसम्म नभएको चुनाव मधेसी जनताको माग पूरा गरेर २ महिना पछि नै गर्दा देशमा कुनै संकट आउनेवाला छैन ।’
२०५२ सालमा माओवादीको ४० बँुदे माग रद्दीको टोकरीमा फाल्दा जसरी देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेको थियो, त्यसरी नै मधेसी जनताको माग सम्बोधन नगरे पहिलेकोजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्नेतर्फ महतोले देउवा सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
‘राजपाले दाहाल सरकार पनि हे¥यौ, अब देउवाजीको सरकार हेर्ने पालो आएको छ । निर्वाचनको मिति केही दिन सारेर पनि जनताको माग सम्बोधन गरिनु पर्छ’, महतोले भन्नुभयो, ‘माग सम्बोधन नगरी चुनाव गराए देश दुर्घटनामा जान्छ ।’
उहाँले राजपाबिनाको चुनाव मधेसमा अर्थहिन हुने दाबी समेत गर्नुभयो । सरकारले संयम भएर संविधान संशोधन गरी राजपालाई समेत चुनावमा सामेल गराउनुपर्ने महतोले तर्क गर्नुभयो । मधेसीको माग पूरा गराउन कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहमति जनाएको महतोले बताउनुभयो । जनतालाई धोखा दिनेलाई जनताले नै तह लगाउँछन् भनि संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकप्रति उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो ।